सि.एम.कन्दङ्वा र ‘अनि धर्ती बोल्दछ’ उपन्यास नियाल्दा............ - Pradesh Dainik
सि.एम.कन्दङ्वा र ‘अनि धर्ती बोल्दछ’ उपन्यास नियाल्दा…………
सीएम कन्दङ्वा, (चन्द्रमान कन्दङ्वा) को जन्म वि.स. १९८५ चैत २९ गते भारतको दार्जिलिङको लिम्बू वस्तीमा भएको थियो । वृखमान र हेमरुपाका जेठा सन्तानका रुपमा रहेका उनको २०१० मा विवाह बन्धनमा बाँधिने क्रम अघि बढ्यो । महालक्ष्मी र सुशीलासँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि ७ छोरा र ७ छोरीको जायजन्म भएको थियो । जीवनलाई जेनतेन गुजारा गर्न तेह्रथुमको तत्कालीन फाक्चुवा–१ चुहानडाँडामा ०३३ सालसम्म बसोबास गरे ।
त्यसपछाडि तेह्रथुमको चुहानडाँडा म्याङलु्ङ्ग, ज्यामिरे, सङ्क्रान्ति, ताप्लेजुङको सिनाम, पाँचथरको सुभाङ, धनकुटाको मुँगामा अध्यापन गर्न भ्याए । उनमा सानैबाट कम्युनिष्ट चिन्तनको छाप परेकाले, दार्जिलिङका माइला बाजे अर्थात् रत्नलाल बाहुनको सङ्गतमा कम्युनिष्ट बने । त्यसताका तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा कम्युनिष्ट थलो भएकाले, उनी लागि परे । २००९/०१० मा धनकुटा जिल्ला सदस्य भएर भूमिगतको कहालीलाग्दो यात्रामा आफ्नो समय खर्चिए । २०१६ सालमा उनको नेतृत्वमा चुहानडाँडा सल्लेरीमा विष्णु सिवाकोटीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल किसान सङ्घ गठन गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा २०१९ सालमा तेह्रथुमको आठराईमा पार्टीको पहिलो सेल कमिटि गठन गरे । आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि उनले ठाउँ—ठाउँमा सर्दै पढाउदै गए । त्यही बसेर परिवर्तनका लागि स्थानीयलाई सङ्गठित समेत गर्दै गए । २००७ सालको प्रजातन्त्रको क्रान्तिमा उनले प्रजातन्त्र सेनानीका रुपमा आफ्नो जीवनलाई दाउ लगाए । उनकै नेतृत्वमा त्यसबेला इलामको पशुपतिनगर र झापाको चन्द्रगढी प्रहरी थाना कब्जा गरेका थिए ।
जीवी याक्थुम्वाको नेतृत्वमा धनकुटा कब्जा भए पश्चात् राज्यपाल ललितबहादुर तुम्वाहाम्फेको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा इमान्दार र कर्तव्यपरायण पहिचानका सीएम मन्त्री बने । २०३३ सालपछि तत्कालीन पथरी—१ मा बसाइँ सरे । त्यसयता राजघाट, दुर्गापुरी र पथरीमा शिक्षण पेशामा आफ्नो जीवन समर्पण गरे । २०४३ सालमा एभरेष्ट बोर्डिङ खोलेर त्यसैलाई निरन्तर गुणस्तरीय र जीवनदायी शिक्षामा जोड दिंदै आए । दार्जिलिङमा त्यसबेलाको मेट्रिक पास (एसएलसी) उत्तीर्ण गरे पश्चात् यता स्नातकोत्तर (डिग्री)का लागि अङ्गे्रजी बिषयको ट्युसन पढाएर प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा क्षमता हासिल गरे । उनको संस्कृत भाषामा पनि अब्बलता थियो । नाच्ने, गाउने, दुकी, तबला बजाउने अद्भूत कला थियो । २०६२ फागुन २५ गते ७७ वर्ष उमेरमा पथरीशनिश्चरेमा उनको दुःखद निधन भयो । उनको लगावले कृतिले उनलाई अमर बनाइसकेको छ । उनमा माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद र जुछे विचारधाराबाट अभिप्रेरित थिए ।
त्यसबेला, एमालेको जिल्ला सल्लाहकार भएर पार्टीबाट ४ पटकसम्म अभिनन्दित भए । पछि माओवादी जनविद्रोह सुरुदेखि नै त्यस विचारमा जीवनको अन्तिम घडीसम्म आबद्धता भए । प्रगतिशीलधार विचार भएका उनका ४ कृति प्रकाशित छन् । ‘राल्फा वस्ती’ (कथासङ्ग्रह) २०५६, ‘विद्रोह’ (कथासङ्ग्रह) २०५७, ‘पूर्व उज्यालो हुनुभन्दा पहिलोका गीतहरु’ (उपन्यास) २०६०, ‘पैतालामा छापहरु’ (उपन्यास) २०६० र ‘अनि धर्ति बोल्दछ’ (उपन्यास) २०६२ हुन् । उनको ‘माक्र्सवादी दर्शनशास्त्र’ प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । उनको ‘अनि धर्ति बोल्दछ’ उपन्यासको समीक्षा गर्न लाग्दा यो देशमा व्यापक रुढीवाढी कुपमण्डुकता एवं अकर्मण्यताद्धारा कुण्ठित नेपाली समाजको भविष्यबारे गम्भीरतापुर्वक सोच्नुपर्ने बाध्यतालाई उपन्यासमा केलाइएको छ । आँखा भएर पनि देख्न नसक्नु, आँखाको प्रयोजन नहुनु बराबर हो भने देखेर पनि दृष्टिकोण नबन्नु अचेतनाको बोधन हो । हेर्नु भनेको आँखाको प्राथमिक क्रिया हो । हेरेर देख्न सक्नु आँखाको दोस्रो प्रगाढ क्रिया हो । हेरेर देख्न सक्नु महादेवको तेस्रो आँखा हो । तर देखेर पनि बुझ पचाउनु देश जनता र आफ्नै निष्ठाप्रति गद्धारी नै हो ।
अझ उनको उपन्यासमा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र गरिबीको मारमा पिल्सिएका नेपाली जनताको सुःखमा मानिसमा कसरी सहानुभूति उत्पति हुन्छ त ? त्यसमा देशको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिमा देखा परेका विद्रोहका स्वरहरु तत्कालीन सत्ताधारी वर्गको बदनियतुपूर्वक चलखेलको विरुद्ध बुलन्द आवाज नभई साथसाथै समकालीन सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्ध पनि हो । ‘अनि धर्ती बोल्दछ’ उपन्यासमा एक परम्परावादी सामाजिक मूल्य र मान्यता र जीवनदर्शनभन्दा भिन्न रहेर मजदुर किसान तथा दलित एवम् जनजातिका समाजलाई केन्द्रविन्दु बनाई तिनको जीवनसङ्घर्ष शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने उपन्यास मान्न सकिन्छ । भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित भएका पाइन्छ ।
शोषण, दमन तथा उत्पीडनका विरुद्ध लिङ्गभेद, जातिभेद, कुलीनता तथा आर्थिक आधारमा गरिने पृष्ठभूमिमा अधिष्ठापित रहेका असमान पद्धति र प्रक्रियाका विरुद्ध भौतिकवादी नवचेतना दिने र जनतालाई सामन्तवादी र पूँजीवादी अव्यवस्थित संस्कृतिको कठोर बन्धनबाट मुक्ति दिलाउने व्यक्ति भएर यथार्थवादी विचारको सम्प्रेषण प्रखरभन्दा चेतनामा गर्न रुचाउने उनी माक्र्सवादीय सौन्दर्यशास्त्रसँग पूर्णतः सम्बन्धित रहेर युग र परिस्थिति अनुसार समाज र सामाजिक जनजीवनलाई निरन्तर अग्रगतितिर प्रेरित गर्ने अभिचेतना यस उपन्यासमा भेटिन्छन् । यसमा वैचारिक धरातलको दृष्टिकोणबाट एक प्रगतिवादी र सामाजिक रुपान्तरणको उपन्यास हो । अझ विश्लेषण गर्दा वैचारिकताको ‘समाजवादी यथार्थकता’ को दर्पण हो यो कृति । प्रसिद्ध उपन्यासकार लीेलबहादुर क्षेत्रीको बसाइँ झै सरर बग्ने कथनात्मकता ग्रामीण पूर्वीय पहाडका थिचोमिचो, गरिब—धनीबीचको भेदभाव, जातिय असमानता आदि रहेकाले सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास भन्न सकिन्छ । तर पनि उपन्यासकार समाज यथार्थ यथास्थितिबाट मात्रै चित्रण नगरेर स्पष्ट रुपमा वर्गीय द्धन्द वैचारिकताको धरातलबाट उठेको पाइन्छ । यो उपन्यास समाजवादी यथार्थपरकको रुपमा पाइन्छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि नेपालको पूर्वीय पहाडी ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भइरहेका शोषण र दमनका घटनावली यस उपन्यासको बिषयबस्तु रहेको छ । आदिवासी जनजाति, दलितप्रतिको शोषण र दमन उपन्यासमा प्रधानता पाइन्छ । धर्मान्धता, जातपात, छुवाछुत, अन्याय र अत्याचार यस उपन्यासका घटनाक्रम देखिन्छन् । यसरी यो उपन्यासमा शास्त्रीय मान्यताका औपन्यासिक गुम्फनहरु छैनन् ।
संरचनाका दृष्टिले यो उपन्यास केही सरल र खुकुलो देखिएको भए पनि यस उपन्यासका पात्र चन्द्रिका र मास्टरबीचको भनिएको उच्च वर्ग र निचवर्ग र मास्टर (बाहुन र चन्द्रिका दमाई ) मा भएको सम्मानजनक प्रेम प्रसङ्गलाई बेजोड ढंगबाट केलाइएको छ । मास्टर सापले समाजमा छर्दै गरेको उज्यालो झिल्का, साहू, महाजनबाट पेलिदै आएको थिचोमिचोका श्रमजीवी निम्नवर्गीय पात्रहरुले व्यहोरेका घटनावलीहरु तथा राज्यसत्ताले सोझा निमुखा, गरिबमाथि अझ पढेलेखेका केही बुझेका वा बुुझ्नेलाई दिएको ज्यादतीको यथार्थ चित्रणको राम्रो संयोजन भएको छ ।
प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि २१ औँ शताब्दीमा टेकिसकेको नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा भइआएका दुःखान्तलाई यो समायोजनको आफ्नै पाराले उद्घाटित गरेको छ । देशभित्र भइरहेको शोषण र दमनहरुको यो उपन्यास एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज पनि भएको छ । एउटा मास्टरको सचेतताले अनेकाँै साहु, महाजनहरुको भ्रष्ट साम्राज्यलाई धरासायी बनाउन सक्दैन । भ्रष्ट आचरण र त्यसद्धारा निर्मित विकृतिहरुको साम्राज्यलाई ध्वस्त पार्न यस्ता अनेकौ मास्टरहरु आवश्यक छ, स्वच्छ देशको तथा आमूल परिवर्तनका लागि । त्यसैले यहाँ उल्लेखित उपन्यासका मास्टर पात्र र यिनीहरुको सचेतना नै समाजलाई अग्रगतितिर लैजाने सशक्त ऊर्जा हो ।
यो उर्जाका लागि यो धर्ती हर्दम–सदा–सदा बोलिरहनेछ । अन्त्यमा, यस उपन्यासले राजनीति, कला, साहित्य, विचार र भावनाबीचको द्धन्दात्मक सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । त्यसैले निःसंकोच भन्न सकिन्छ । आधुनिक उपन्यास साहित्यमा विशिष्टता सहितको एउटा गतिलो उदाहरण हो – ‘अनि धर्ति बोल्दछ’ । यस उपन्यासमा भाषशैलीको प्रयोग केही जटिलता रहेपनि भाषागत दुर्बीब्यता भेटिन्छन् । सरल र सहज भाषाको प्रयोगले यस उपन्यासलाई उच्च कोटीमा पु¥याएको आभाष भएको छ ।